HomeHoryaalladaKooxaha Barcelona, Arsenal iyo Liverpool oo ku loolamay helitaanka Mucjisadda Juan Cuadrado
Weeraryahanka kooxda Fiorentina ayaa ka mid ah xiddigaha sannadka samaynta ku leh suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee qaarada yurub waxaana isku haysta kooxaha ugu quwada wayn kubadda cagta.
Macalinka cusub ee kooxda Luis Enrique ayaa u arka xiddigan JUAN CUADRADO mid ku haboon in uu u ciyaaro kooxda Barcelona waxaana kooxda reer Spain ee ku fashilmatay saxeexa xiddigan bishii January ee horaantii sannadkan markii ay geeyeen lacag aan u cuntamin kooxaha leh mulkiyada xiddigan.
Xiddigan reer Colombi ayaa waxaa sidoo kale caydhsanaya saxeexiisa kooxaha horyaalka ingiriiska ay ka mid yihiin Liverpool iyo Arsenal oo bartilmaameed u yahay hadii uu dhamaado koobka adduunka waxaana ay u badan tahay in ay iska fasixi doonto kooxdiisa Fiorentina hadii dalab macquul ah hesho.
26-jirkan ayaa waxaa lagu qiimeeyay lacag dhan £20m,laakiin lacagahaasi ayaa ah kuwa ka badan mida ay ku danayaan kooxaha ciyaara Premier League. Dhibaatada ugu badan ee la kala kulmi karo saxeexiisa ayaa ah in qayb ka mid ah lahaanshaha xiddigan ay wada wadaagan labada kooxood ee Viola iyo Udinese.